A ephuke umhlathi - ukuhlukumeza ubuqotho ithambo bedle amabutho. Lezi waphuka kungaba:
Esibuhlungu. Kunemiphumela umthelela, kuqhuma isibhamu kwesilonda, ingozi noma ingozi;
Sokugembula. Bona kungavela ngokuzenzekelayo ngenxa osteomyelitis, nginesimila esikhulu noma isimila esibulalayo.
akhawunti waphuka Mandibular cishe 70% kukho konke ukulimala ezenzeka ebusweni. Umhlathi ongezansi lesi sijame njengebhoksi ukhamba futhi ukulimala akukhona okungavamile ukuba likhithike double, kathathu ngisho waphuka.
Broken emhlathini imiphumela ungaba ezihlukahlukene. Umlomo ezivamile nje iyeke kahle evulekile naseduze. Uma ukwa umsuka esigabeni lateral we mandible, umonakalo ezinzwa mandibular kungenzeka. Khona-ke isisulu ihlangabezana ukungabi namizwa umhlathi ekulimaleni, kuyilapho ukonakala ndikindiki zamazwe amabili wonke emhlathini. Lapho Break emhlathini ukwa ezihambisana mucosa ngomlomo kanye ezithambile izicubu izinyembezi, kuthiwa ukuvula. Ngezinye izikhathi umuntu elimele kabana imikhumbi emikhulu kanye hematoma enkulu kwakhiwa. Ngokuvamile ephelezelwa ukwa ka ukuxukuzeka, futhi kwezinye izimo, umuntu ehlelwa ukushaqeka.
Uma wena noma othile kusuka imvelo yakho sekukhona a ephuke umhlathi, kufanele sihlale sizolile futhi ushayele "ambulensi." Njengomthetho, ukubukeka izilonda ebusweni ayifani ngobucayi umonakalo, kodwa ngeke akwenze ngaphandle kosizo ezikhethekile. Ngisho noma ukulimala akuyona esinzulu, zama uzibeka esikhundleni umhlathi akufanele kube, ngoba kungaba yingozi empilweni.
Uma isisulu aquleke, makufakwe nganxanye ukuze ngamathe, igazi ulimi akubi isithiyo ukuphefumula. Kumelwe uyiswe endaweni efanayo. Endabeni ukopha ezinzima kuze kufike usizo lwezokwelapha, ungasebenzisa tampons, kanti uma unanoma amakhono akhethekile, kubalulekile ukuba ucindezele umfula carotid ekulimaleni.
On yokwemukela lesibhedlela ngempela wachitha-X-ray luhlolo. Kuyadingeka ukuqinisekisa ukuxilongwa, zilethwe emva behlolwa isiguli. Lapho kukhona ukwa emhlathini, impatho isiqalisile ngokushesha njengoba isimo lesiguli uhlaliseke. indlela yakhe kuyakhethwa kuye ngobucayi umonakalo. Ukwelashwa kuhlanganisa izinyathelo ezilandelayo:
Inhlanganisela izingcezwana eziyizinsalela, okuyinto eyenziwa ngaphansi izinzwa wendawo. Kungaba kwenziwe ngqo ngesandla. Kodwa kwezinye izimo, ikakhulukazi uma esikhathini yokulimala, wathatha impela isikhathi eside, le nqubo yenziwa kancane kancane, usebenzisa imishini ekhethekile, kanye traction extraoral noma intermaxillary;
Nenkanuko edlulele ka izingcezwana wethambo emhlathini isikhathi ekululameni. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa izindlela ezihlukahlukene kanye namathuluzi;
Ukudala lokho kuthuthukisa izimo ezibangela le ukululama ngokushesha emhlathini.
Prevention yezinkinga bemvelo ezithathelwanayo kanye ukuvuvukala.
Uma ukwa emhlathini iphathwa surgically, kungenzeka izingcezwana fixed nge crosslinking ka tantalum noma steel izintambo, izingcwecwe zensimbi ezilula noma izinaliti, ama-apharathasi extraoral.
Umgomo oyinhloko nokwelashwa waphuka of nemihlathi kuyinto Fusion imvuthuluka esimweni ozoqinisekisa ukubuyiselwa occlusion, futhi ngesikhathi esifushane. Uma ephuke umhlathi kuhlangene nezinye umonakalo umuntu, kunesidingo ukuhlinzwa isikhumba. Ngokuvamile yenziwa ngezigaba eziningana, futhi wenza amazinyo okufakelwa emhlathini nobuso, uma kunesidingo. Ngezinye izikhathi ukwa emhlathini zikhona ezinjalo eziyingozi njengoba osteomyelitis, meningitis, ithumba kanye nezinye izifo.
Sternum Xiphoid anda - indlela ukuba?
Ziyadliwa Italian - umbala sokunethezeka, induduzo kanye nokuvumelana
Amakhowe eyayigcwele kuhhavini ushizi inyama nengulube
Indlela ukuhlela kahle ngabantu abadala imincintiswano?
Juicer "Scarlet": incazelo, izici kanye Umgomo we operation